Ungayithumela njani nge-Instagram ukusuka kwi-Mac ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
NgoJanuwari 31, 2019 0 IiCententarios 1130
Zininzi izinto zobugcisa zemihla ngemihla ezibonakala veki nganye, kwaye zihlala zinethiwekhi yoluntu. Ukusukela, iiwebhusayithi zokuncokola zisehlo kwesaqhwithi. Ezi ziye zavela nge-a isantya esimangalisayo nangaphandle kokuma. Omnye wabatyholwa kakhulu ngabemi, yindawo yenethiwekhi yoluntu ye-Instagram. Yeyiphi eyaziwa njengeqonga layo abathandi bokufota, kwaye oko ngoku akunamda. Ngaphandle kohlaziyo lwe-interface, kusenzima kubasebenzisi ukuthumela iifoto ezivela kwikhompyuter. Kungenxa yoko le nto abasebenzisi abaninzi bekhwaza ukuba bangathumela njani kwi-Instagram ukusuka kwi-Mac.
Olunye lwezona zixhobo zokucebisa kunye neziceliwe kakhulu zanamhlanje yi-Instagram eyaziwayo. Le nethiwekhi yenze indlela yayo eluntwini ishumi leminyaka, kwaye iye iphumelele impumelelo kuyo. Ngapha koko, amathuba okupapasha iifoto kunye neevidiyo yindlela yakhe ukususela oko waqalwa. Nangona kunjalo, ngaphandle kwee-constants kwaye uhlaziyo oluninzi into enesicelo ayisakwazi iposti ukusuka kwikhompyuter.
Kungenxa yoko le nto abasebenzisi abaninzi, ebusweni bengavumelani, becele ezinye iindlela. Ke ngoko, kuya kunyanzeleka ukuba ufunde indlela yokushicilela kwi-Instagram evela kwi-Mac. Ukususela, enye yeenkqubo zokusebenza esetyenziswa kakhulu Kwaye kwindawo ephambili yexesha ngu-Apple. Kwaye nangona iqonga yenethiwekhi yentlalo ingayinciphisi iposi ikhompyuter, kuyenzeka ukuyenza kwi a uthotho lwamanyathelo.
Siyanceda nawe buyisela ipaswedi yakho ye-Instagram Ukuba uyayifuna.
Kutheni usithumela ku-Instagram usuka kwiMac?
Izizathu zokuthumela kwi-Instagram ukusuka kwi-Mac zininzi, nangona kunjalo, emva kokufunda ukuyenza, izibonelelo zinjalo. Yiloo nto abantu abaninzi kwaye amaziko oshishino Banyula ukwenza le ndlela yabo yolawulo lwenethiwekhi. Ukusukela, ngale nkqubo kufuneka bafumane ulawulo olungcono kunye nempumelelo yeenjongo zabo. Kwaye ngenxa yoko, akufuneki usebenzise nasiphi na isicelo esongeziweyo okanye Ayikho inkqubo. Ke ngoko, ukwenziwa kwenethiwekhi kuya kufezekiswa ngaphandle kobunzima.
Nje ukuba iqale ukupapasha kwi-Instagram ukusuka kwi-Mac, umsebenzisi kuya kufuneka afike kwisantya esifanayo sokupapashwa esiya kuba ne isixhobo esiphathwayo Ukusukela, ukufezekisa injongo, inkqubo kufuneka isetyenziselwe ukudideka ujongano lweqonga. Ke, ngale ndlela, isantya sokupapashwa siya kufana inkqubo yokusebenza I-Android, i-iPhone okanye iWindows yeWindows.
Kukho iinkampani ezininzi kunye nabasebenzisi abasebenzisa i-Instagram kwi-Mac ye intuthuzelo ebonelelweyo. Umsebenzisi unokusebenzisa ikhompyuter yakhe ukupapasha eqongeni. Yintoni ewenza lula umsebenzi ngandlela thile kwaye wenze ubhalo lohlobo oluthile Umxholo.
Ngamanye amaxesha, abantu abazizeli ezabo isixhobo esiphathwayo Ewe, kuba belahlekile okanye banayo ndahlala ekhaya, nditsho ngomonakalo wayo. Oku kubangela ukuba umsebenzisi ajonge iindaba kwiqonga lewebhu kwenethiwekhi. Kodwa, akunakwenzeka ukuba upapashe Umxholo onqwenelekayo. Ke, ukushicilela kwi-Instagram ukusuka kwi-Mac kuvule umsantsa phakathi kwabasebenzisi abahlukeneyo. Ngokuchaza kwayo ukungabinakho isixhobo esiphathwayo.
Kukho indawo ezininzi zomsebenzi apho ukusetyenziswa kwe isixhobo somsebenzi Ithintelwe. Kungenxa yoko le nto abasebenzisi abaninzi besebenzise ukhetho ukupapasha kwi-Instagram ukusuka kwi-Mac njengendlela yokulawula inethiwekhi yabo. Ukuze ukwazi ukusebenzisa i-Instagram kubuqaqawuli bayo obugcweleyo. Sikuxelela njani Thumela ibali kwi-Instagram.
Thumela ku-Instagram usuka kwiMac
Inkqubo yokushicilela kwi-Instagram evela kwi-Mac ilula kakhulu La ngamanyathelo ekufuneka elandelwe ukusuka kukhetho lwenkqubo yomkhangeli zincwadi. Ke ngale ndlela unokukhohlisa iqonga lewebhu ukuze ungene ngokungathi sisixhobo esikwiselfowuni. Inkqubo kufuneka ilula kakhulu kwaye Akukho nto inzima
Inyathelo lokuqala lokupapasha kwi-Instagram ukusuka kwi-Mac ngokusebenzisa isiphequluli Google Chrome Iya kuba kukukhuphela. Umsebenzisi kufuneka akhuphe ibrawuza ukuqala inkqubo. Ukwenza oku, kuya kufuneka ukhethe nakweyiphi na enye inkqubo yokukhangela esetyenziselwa ukukhangela kunye nokukopa kwiGoogle Chrome eyaziwayo. Ukuqhubeka kamva kwi ukufakwa yalo
Xa isikhangeli sifakiwe, umntu lowo kufuneka afikelele iphepha lasekhaya yeqonga. Ukwenza oku, idilesi yewebhu ibekwe kwibha yokukhangela. Enye indlela enokuba kukukhangela igama lesicelo kunye nokukhetha elandelayo ye ithebhu ehambelanayo.
Xa ukwiphepha eliphambili le-Instagram, umsebenzisi uya kubuzwa idatha yakho. Bamele babe, igama lakho lesidlaliso okanye igama lomsebenzisi, kufuneka ukwazi ukusebenzisa i-imeyile yakho. Kwaye ngokufanayo, kufuneka ubeke iphasiwedi ehambelanayo kwindawo eceliweyo. Yenjenje ufake kwiakhawunti yakho ye-Instagram.
Sele ungene kwiakhawunti yakho ye-Instagram, ukuze ukwazi ukupapasha kwi-Instagram ukusuka kwi-Mac umsebenzisi kufuneka ucofe kuyo "Vavanya". Ukwenza oku, kufuneka ucinezele iqhosha le mouse ngexesha ucofa iqhosha u "Ctrl". Oku kuya kubonisa a Imenyu yeenketho, apho into eyimfuneko iya kuba "Hlola".
Emva koko, kufuneka wenze ukuba kuboniswe uhlobo lweselula Oku kunokuba kukukhetha uphawu lwe "Mobile show". Okanye imiyalelo. Ukwenza oku kufuneka ucinezele iqhosha lokuyalela + ishift + m. Oku kuya kubonisa imenyu yezixhobo ezinokusetyenziswa kunye kufuneka ukhethe ezinye. Unokucetyiswa ukuba usebenzise umatshini we-iPhone 6 Plus.
Unokuba nomdla wokwazi Ufunde umyalezo wakho we-Instagram.
Emva kwayo yonke inkqubo, umntu okanye iziko lishishini kufuneka hlaziya iphepha Ukuze ufumane ukhetho lokufaka iifoto ezikhoyo. Kwaye, ngale ndlela, injongo efunekayo iya kuba iphunyeziwe, eya kuba kukupapasha kwi-Instagram ukusuka kwi-Mac.
¿Ufuna ukwazi ukuba ngubani omayo ukulandela kwi-Instagram?
2 Kutheni usithumela ku-Instagram usuka kwiMac?
3 Thumela ku-Instagram usuka kwiMac
3.3 Zazise ukuba ungubani
3.6 Qalela ngokutsha
Jonga indlela yokuphuhlisa isicwangciso seendaba zentlalo